Repoblika Demokratika Kongo: Mitombo Ny Fanalan-jaza An-tsokosoko Ao Goma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2012 4:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, polski, Italiano, русский, Français
[Nangonina tamin'ny alalan'ny mailaka sy resadresaka mivantana tamin'ny teny frantsay ny fijoroana vavolombelona amin'ity lahatsoratra ity, ary amin'ny teny frantsay avokoa ny rohy rehetra]
Tranga mahazatra ao amin'ny faritany maro ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ny fanalan-jaza an-tsokosoko, indrindra ao Goma, Kivu Avaratra, vokatry ny fanalan-jaza izay miha-mitombo isan'andro isan'andro avokoa no anton'ny ankamaroan'ny fahafatesana. Tao anatin'izay herinandro vitsy izay, maro ireo zazarano hita faty manerana ny tanàna ao Goma, ao atsinanan'i D.R.C.
Tompon'andraiki-panjakana ao an-toerana Mapendo Victorine, nandefa mailaka fa sahiran-tsaina mafy izy manoloana izao toe-draharaha sokajiana ho toy ny “heloka azo saziana” izao:
Herinandro lasa izay, zaza menavava 5 volana anaty harona plastika no hita tao anaty fako tao Mikeno, faritra midadasika mifanolo-bodirindrina ao Goma. Tsy fantatra izay reny nahavita izao.
Mandrara ny fanalazan-jaza manerana ny firenena ny lalàna Kongoley, hiharan'ny sazy henjana avy hatrany ireo izay izay tratra manao izany fanalan-jaza tsy ara-dalàna izany. Mpisolovava iray Alain Lushule, miasa ao amin'ny fitsarana ao Goma, nanazava taminay fa sazy henjana an-tranomaizina 5 hatramin'ny 6 taona no azon'ireo izay tratra manala zaza, araka ny voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana Kongoley (Boky II) andininy faha 165 sy 166 , ary sazy an-tranomaizina 5 hatramin'ny 15 taona kosa no azon'ireo izay mandray anjara amin'ny fanatontosana ny fanalan-jaza.
Toera-pitsaboana ao Goma, D.R.C., sary avy amin'i Julien Harneis tao amin'ny Flickr CC-license-BY)
Mpanao gazety mpaka sary Alain Wandiwoji naneho ny ahiahiny tao amin'ny bilaoginy manoloana izao toe-draharaha mampatahotra ao Goma izao:
Nanomboka tamin'ny volana Desambra 2011, zazarano 11 no nofongarina tanaty tatatra kely ary zaza menavava 3 nosemporina kosa no hita tanaty fanariam-pako. Pasitera avy ao Goma nilaza hoe: “Tsy rariny tsy rariny!”
Tezitra mafy ilay renim-pianakaviana nahita ity zazarano ka hoy izy nilaza taminay:
Tokony hotadiavin'ny polisy ny olona nahavita izao heloka izao ary omena sazy henjana. Nihevitra ireo vondrona ankizy tonga nahita ny fatin'ireo zazarano fa balaonina ireo. Niteraka alahelo lehibe ny fahitana ireo zazarano ireo, kanefa tsy mba misy olona manontany ny amin'ny antony mahatonga ny fanalan-jaza miha-mahazo vahana hatrany. Manameloka izao toe-javatra izao avokoa ny tsirairay.
Fortuna Lufungula, mpiaro ny zon'olombelona ao Goma, nanazava toy izao tao amin'ny mailaka:
Araka ny fahendrena nentim-paharazana Afrikanina sy Kongeley, sokajiana ho toy ny heloka bevava famonoan'olona ny fanalan-jaza. Tsy mahazo mamono olona, tsy misy olona afaka mamono na manala ny ain'ny zazarano, na dia niforona iray andro aza izy. Famonoana olona ny fanalan-jaza ary tokony hosaziana.
Azo lazaina ve fa heloka bevava ny fanalan-jaza ataon'ny ankamaroan'ireo vehivavy tanora ary indrindra koa ireo vehivavy manambady ao Goma na dia tsy fantatra aza ny antony, ny olana sy izay voka-dratsiny? Inona no antony lehibe mahatonga ireo tovovavy hanala-zaza?
Vinavinan'ireo vehivavy ao Goma, avy amin'i Passy Mubalama, Uhaki News
Sarotiny dia sarotiny ireo ray aman-dreny
Maro ireo ray aman-dreny ao Goma no tsy manaiky mahita ny zanany vavy mitondra vohoka, eny fa na dia efa ampy taona aza izy ireo. Vao mahare ny ray aman-drenin'ireo tovovavy fa bevohoka ny zanany, dia voaraoka ao an-tokantrano avy hatrany izy ka tsy maintsy terena hitady na hamonjy ilay lehilahy nahabevohoka azy mba hanorina tokantrano.
Mwamini Bujiriri, renim-pianakaviana ao Goma, nandroaka ny zanany vavy 14-taona izay bevohoka, lehilahy mpiray tanàna aminy ihany no nahabevohoaka ny zanany, nandositra ny adidiny anefa ilay lehilahy. Bujiriri nanazava toy izao:
Tsy afaka hiara-hipetraka amin'ny zanako vavy aho raha mitondra vohoka izy, satria manala-baraka ahy izany ka tokony hamonjy ny rain-janany izy. Sarotra be izany hoe vehivavy [renim-pianakaviana] roa miara-mipetraka anaty tokatrano iray .
Maro ireo ray aman-dreny no tsy te handre ny teny hoe “fanalan-jaza” satria, araka ny filazan'izy ireo, famonoana olona ny fanalan-jaza.
Vehivavy ao Goma by @RachelBayoli
Ny fandosiran’ andraikitra ataon'ny zatovolahy
Mitombo ny fandosirana andraikitra ataon'ireo zatovolahy, ary noho ny finoana, maro ireo zatovovavy no voatery manala zaza an-tsokosoko na tonga hatrany amin'ny famonoan-jaza mihitsy.
Tovovavy iray tsy nitonona anarana, nijoro vavolombelona taminay:
Raha vao bevohoka aho, natahotra mafy hilaza izany amin'ny ray aman-dreniko satria tsy maintsy handroaka ahy ao an-trano izy ireo na mety hamono ahy mihitsy aza. Nanapa-kevitra ny hangina aho. Tao anatin'izany, tsy nanaiky mihitsy ilay lehilahy nahabevohoka ahy fa izy no rain-janako. Trotraka tanteraka aho ary tsy sahy nilaza na inona na inona tamin'ny ray aman-dreniko kanefa tsy hitako ihany koa izay ho aleha, noho izany, nanapa-kevitra ny hanala ilay zaza aho. Tsy afaka nankany amin'ny hopitaly aho satria voararan'ny lalàna ny fanalan-jaza aty amin'ny firenenay ary tsy manaiky hanao izany ihany koa ny dokotera ao. Voatery nanantona dokotera lavitry ny fonenako aho, izay afaka nanala ilay zaza an-tsokosoko.’
Tahaka ity tovovavy ity, marobe ihany koa ireo tovovavy hafa voatery manao fanalan-jaza an-tsokosoko, mety hitera-doza ho azy ireo anefa izany ary mety hanaraka hatramin'ny ainy koa
Maro ireo tranga mitovy izany izay notaterin'ny CONDE, toera-pitsaboana ao Karisimbi, toerana ao akaikin'i Goma. Hoy ilay mpitsabo ao amin'ity toera-pitsaboana ity nilaza taminay:
Tamin'ny volana Martsa lasa teo, tovovavy teo amin'ny roa-polo taona teo no namoy ny ainy noho ny fanalan-jaza. Efa niharatsy tanteraka ny fahasalamany tamin'izy tonga tato amin'ny hopitaly. Nataonay izay nety rehetra, saingy tsy tana intsony ny ainy. Marobe ireo tovovavy manala zaza an-tsokosoko no mamoy ny ainy.
Finoana sy ny fanalan-jaza
Maro kosa ireo tovovavy voaolan'ireo lehilahy izay matetika mitam-piadiana no tsy sahy manala zaza noho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mijaly mafy ireo tovovavy ireo, noho ny vohoka tsy niriana sy noho ny finiavan'izy ireo tsy hanohitra ny finoana ao anatiny.
Vehivavy ireo niharan'izany tranga izany no nitantara taminay momba ny fanohanana sy fikarakarana natao azy tao amin'ny Foibe Lydia. Ny ASLPC, (Action Sociale pour la Promotion des Laissés pour Compte) (Asa soa ho fanohanana ireo tsy manan-kaleha intsony) no nanorina ity foibe ity tao Goma, izay miandrakitra ireo izay niharan'ny herisetra ara-nofo, hoy izy nitantara taminay:
Raha voaolana aho, mafy tamiko ny niaritra izany ary tena nijaly tanteraka aho. Indrisy anefa fa volana maro taty aoriana, bevohoka aho. Tsy fantatro izay atao. Tsy tiako ny hitaiza ilay zaza satria avy amin'ny fahotana. Raha hanala zaza koa aho mbola fahotana ihany koa izany, ka nanapa-kevitra ny hitazona ilay zaza aho. Raha mahita azy aho dia tonga ato an-tsaiko avokoa ny fijaliana niaretako.
Ny Toe-draharaha araka ny fijerin'ny mpitsabo manam-pahaizana manokana
Mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fananahana ao amin'ny Toeram-pitsaboana ao Goma nanome ny soso-keviny:
La jeune fille devra mit pouvoir avoir le droit, dans le cas où elle se sent pas prête moralement et physiquement d’avoir un enfant de choisir d'avorter.
Tokony hanan-jo hisafidy na hanala zaza na tsia ny tovovavy, raha toa ka mbola tsy vonona ara-tsaina sy ara-batana izy hitaiza.
Raha ny firongatry ny toe-javatra no jerena, tokony hojeren'ny governemanta Kongoley ny hanovàna na hanovanana ny lalàna mifehy ny fanalan-jaza ankehitriny, hoy ilay mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fananahana nanazava:
Matetika tokoa no miditra amin'ny fanalan-jaza an-tsokosoko ireo niharam-boina. Tokony hanome alalana ofisialy amin'ny fanalan-jaza malalaka ny governememanta mba hampiatoana izany tranga izany. Raha te hanala zaza ny tovovavy iray, tokony atao eny amin'ny toera-pitsaboana satria misy fanafody ao ary tsy misy atahorana. Tokony hamafisina ihany koa ny fanentanana amin'ny fampiasana ny fitaovana tsy mahabevoka (fanabeazana aizana) mba hisorohana ny vohoka tsy iriana.